Vaovao - Efa nandray anjara tamin'ny CMEF 2020 ve ianao?
Ny faha 19/10/2020 no fanokafana lehibe ny tsenaben'ny International Equipment Equipment International (CMEF) faha-83 sy ny International Component Manufacturing & Design Show (ICMD) faha-30 ao amin'ny National Exhibition Center Shanghai.
Betsaka ny orinasa an-trano tena tsara nandray anjara tamin'ireto hetsika roa mbola tsy nisy toa azy ireo.
Taorian'ny fanangonana sy rotsak'orana am-polony taona maro, CMEF & ICMD dia novolavolaina ho sehatra iraisam-pirenena manerantany ho an'ny serivisy manerantany manarona ny firavaka indostrialy misy fitaovam-pitsaboana, manambatra teknolojia vokatra, fanombohana vokatra vaovao, varotra fivarotana, fiaraha-miasa amin'ny fikarohana siantifika, sns., Mifantoka amin'ny mampiseho ny haitao farany eo amin'ny sehatry ny famokarana fitaovana fitsaboana, ary mampiroborobo ny fifandraisan'ny rojom-baravaran'ny indostrialy fitaovana fitsaboana.
Voalaza fa ny efitrano fampirantiana nandritra ny efatra andro dia nanana efitrano valo, izay mirefy 220000 metatra toradroa. Ireo kaonferansa sy dinika akademika miisa 60, mpitarika indostrialy mihoatra ny 300 ary famoahana vokatra 1500 mahery dia mitondra antsika hijery ireo haitao farany.
Amin'ny maha-mpitarika amin'ny indostria mihinana fanafody, ny orinasanay Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd.
Nasehony ny efitranony x38 tao amin'ny Hall 1.1 izay nampiseho tamin'ny ankapobeny ny katesia urinina, ny làlan'ny saron-tava laryngeal, ny fantsona endotracheal, ny fantsom-bavony, ny fitaovana fisorohana ny valanaretina ary ny vokatra hafa.
Izy rehetra dia novolavola sy novokarin'ny orinay.
Misy hatrany ny fivezivezena ny mpividy / mpitsidika izay naneho fahalianana lehibe amin'ny vokatray ary manantena ny fiaraha-miasa.
Tamin'ny taona 2020 ny valanaretina Corvid-19 dia nitondra krizy eran'izao tontolo izao, nandritra izany fotoana izany nitondra antsika ny fanamby sy ny fotoana mety. Amin'ny maha ekipa mpikambana amin'ny ady amin'ny areti-mandringana ity, Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. no tokony ho voalohany mitondra ny valan'aretina, manome fanohanana ampy ny fitaovana, hifantoka amin'ny fanavaozana sy ny fahombiazana, ary hiezaka handray anjara bebe kokoa amin'ny ady amin'ny valanaretina.
Amin'ny ho avy, Kangyuan dia tsy hanadino ny fikasany tany am-boalohany, handroso mialoha, hikaroka làlana vaovao misy ny fanavaozana eo amin'ny sehatry ny fitaovam-pitsaboana ao Shina, ary hitondra fanovana lalina kokoa eo amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny fitsaboana.
Fampatsiahivana mafana: araky ny fepetra takiana amin'ny fisorohana ny valanaretina, alohan'ny hidirany amin'ny efitrano fampirantiana, ny mpitsidika rehetra dia tokony hisaron-tava, haneho ny kara-panondrony, ary ny fehezan-dalàna momba ny fahasalamana any Shanghai apetraka amin'ny Alipay na WeChat.